छिमेकमा कोरोना महामारी फैलिँदै भुटान कसरी छ सुरक्षित ? के छ भुटानको अवस्था ? – ramechhapkhabar.com
छिमेकमा कोरोना महामारी फैलिँदै भुटान कसरी छ सुरक्षित ? के छ भुटानको अवस्था ?
कोरोना संक्रमण दर दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, नेपाल, पाकिस्तान लगायतमा बढिरहेकै बेला भारतसँगै सीमा जोडिएको भुटान भने ‘सेफजोन’मा देखिएको छ । भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको ‘कोभिडसिल्ड’ नामक खोप लगाएर भुटान ढुक्क भएर बसिरहेको छ ।
भुटानमा सोमवारसम्म ९४ प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । महामारीको दोस्रो लहरले भारतलाई छोपिरहँदा भुटान भने शान्त छ । हालसम्म भुटानमा ९३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यालाई भ्याक्सिनेट गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा बनेको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन गत महिना हेलिकोप्टोरमार्फत भुटान पुर्‍याइएको थियो ।
भुटानको यो अवस्था देखेर अहिले विश्वका धेरै देश चकित छन् । भारतले दिएको कोरोना भ्याक्सिनबाट उसले यो सफलताको कथा लेखेको हो । भुटानमा सोमवारसम्मको रेकर्डअनुसार १ हजार ११९ संक्रमित र ९९९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । कोरोनाबाट हालसम्म १ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ ।
हिमनदी र अग्ला पहाडले घेरिएको देशको कतिपय ठाउँ जान सडकसम्म छैन । भुटान सरकार प्रत्येक नागरिकप्रति उत्तरदायी छ । कोरोना संक्रमित भइहाले स्वास्थ्यमा उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाइएको छ ।
तर छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक ३ लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइरहेका छन् । दैनिक कोरोना संक्रमित हुने दरमा भारत पहिलो स्थानमा छ । जहाँ दैनिक ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ । नेपालमा मात्रै सोमवार ७ हजार ३ सय ८८ संक्रमित थपिए । यो संख्या कोरोना महामारी फैलिएपछि हालसम्मको नयाँ रेकर्ड हो ।
सार्क मुलुक पाकिस्तानमा दैनिक ४ हजारको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् । जहाँ ८ लाख ३४ हजार १४६ संक्रमित भइसकेको छन् । कोरोनाबाट मात्रै १८ हजार १४९ जनाको मृत्यु भएको छ । अफगानिस्तानमा हालसम्म ६० हजार २८८ संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये २ हजार ६४२ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय अफगानस्तिानमा कोरोना संक्रमित हुने दरमा भने केही कमी आएको पाइन्छ ।
माल्दिभ्सिमा ३० हजार ७ सय ४५ संक्रमित भएको रेकर्ड छ । जहाँ हालसम्म ७४ जनाको कोरोनाबाट निधन भएको छ । श्रीलंकामा हालसम्म १ लाख ११ हजार ७५३ संक्रमित भएका छन् । जहाँ ६९६ संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ ।
कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित अर्को मुलुक बंगलादेश हो । बंगलादेशमा हालसम्म ७ लाख ६३ हजार ६ सय ८२ संक्रमित भएका छन् । सोमवार मात्रै १ हजार ७३९ संक्रमित थपिएका छन् । ६५ जना थप कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै बंगलादेशमा मृतक संख्या ११ हजार ६४४ पुगेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।